ပရိုတွန်ကုထုံးမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - ProCure Proton ကုထုံး
ပရိုတွန်ကုထုံးနှင့် ပတ်သက်၍ အထွေထွေမေးခွန်းများ
ပရိုတွန်ကုထုံးသည်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဓာတ်မှန်ရောင်ခြည်ကဲ့သို့၎င်းအားခွဲခြင်းနှင့်ကြီးထွားခြင်းမှကာကွယ်ခြင်းဖြင့်ကင်ဆာဆဲလ်များကိုဖျက်ဆီးသည်။ သို့သော်ပရိုတွန်ကုထုံးသည်ပရိုတွန်များ - အပြုသဘောဖြင့်အားသွင်းထားသောအက်တမ်အမှုန်များ - ကိုစံဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းတွင်အသုံးပြုသောဖိုတွန်အစားအသုံးပြုသည်။ ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းနှင့်မတူသည်မှာပရိုတွန်များသည်သူတို့၏စွမ်းအင်အများစုကိုအကျိတ်အတွင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှတ်ရန်ထိန်းချုပ်ထားပြီးအနီးအနားရှိကျန်းမာသည့်တစ်သျှူးများကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။1 ရလဒ်အနေဖြင့်လူနာများသည်များသောအားဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးများကိုလက်ခံရရှိနိုင်ပြီးကုသမှုမှဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်သာရရှိနိုင်သည်။
ပရိုတွန်များသည်သူတို့၏စွမ်းအင်ကိုနက်ရှိုင်းသောနက်နဲရာများ၌လွှတ်ထုတ်ပြီးသူတို့၏စွမ်းအင်အများစုကိုအကျိတ်နေရာ၌သိုလှောင်ကြသည်။ သူတို့၏တိကျမှုကြောင့်အရေပြား၏မျက်နှာပြင်အနီးရှိခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိကင်ဆာအကျိတ်များကိုပစ်မှတ်ထားနိုင်သည်။ Bragg Peak ဟုခေါ်သောဒီပရိုတွန်ဓါတ်ရောင်ခြည်၏အမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်ကိုသတ်မှတ်သည်။ ထိုအချက်ပြီးသည်နှင့်ချက်ချင်းဆေးပမာဏသုညသို့ကျသွားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအကျိတ်များ၏ရှေ့မှောက်၌ကျန်းမာသောတစ်သျှူးများသို့ဓါတ်ရောင်ခြည်အနည်းငယ်ရောက်ရှိခြင်းနှင့်အကျိတ်နောက်ကွယ်မှကျန်းမာသောတစ်ရှူးသို့ရောက်ရှိခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ကျန်းမာသောတစ်ရှူးများကိုပျက်စီးမှုနည်းစေပါသည်။1 လူနာများသည်ပုံမှန်ဓာတ်မှန်ဓါတ်ရောင်ခြည်နှင့်အတူပုံမှန်ဖြစ်သောရေတိုနှင့်ရေရှည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်ကိုတွေ့ကြုံခံစားတတ်သည်။1-7 စွမ်းအင်များများကိုအကျိတ်ထဲ၌တိုက်ရိုက်အပ်နှံနိုင်သဖြင့်ပိုမိုထိရောက်သောကုသမှုကိုခံယူရန်ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးပမာဏကိုပို့ဆောင်နိုင်သည်။1
ပရိုတွန်ထုပ်များသည်ကင်ဆာဆဲ (လ်) များကိုမည်သို့ဖျက်ဆီးပစ်သနည်း။
ပရိုတွန်များသည်ကင်ဆာဆဲ (လ်) များအားထာဝရပျက်စီးစေသဖြင့် ခွဲ၍ မကြီးထွားနိုင်ပါ။ ပရိုတွန်များသည်ကင်ဆာဆဲ (လ်) များ၏နျူကလိယ (သို့) အလယ်ဗဟိုသို့ရောက်သောအခါသူတို့သည်စွမ်းအင်ကိုဆဲလ်အီလက်ထရွန်များသို့လွှဲပြောင်းပေးသည်၊ သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသောကင်ဆာဆဲလ်များ၏ဒီအင်အေကိုပျက်စီးစေသည်။
ပရိုတွန်ကုထုံးသည်စမ်းသပ်မှုမဟုတ်ပါ၊ အမှန်မှာ၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုကကင်ဆာလူနာများကိုကုသရန်အတည်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းကို ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်ပိုင်းတွင်ပထမဆုံးဆေးစစ်ပြီးကတည်းကကင်ဆာကုသမှုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Medicare နှင့် Medicaid သည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှစတင်ကာကုသမှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ ယနေ့အချိန်အထိကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူပေါင်း ၁၈၀,၀၀၀ ကျော်သည်ဥရောပ၊ အာရှနှင့်ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိကင်ဆာစင်တာများတွင်ပရိုတွန်ကုထုံးကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။8.
၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင်ရူပဗေဒပညာရှင်ရောဘတ်ဝီလ်ဆင်ကပရိုတွန်များကိုကင်ဆာအကျိတ်သို့ဓါတ်ရောင်ခြည်ပမာဏတိုးမြှင့်ပေးနိုင်ရန်ပထမ ဦး ဆုံးအဆိုပြုခဲ့သည်။ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်တွင်အမေရိကန်နှင့်ဥရောပရှိလူနာများအားပထမဆုံးသုတေသနစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များသည်ကတိတော်များရှိသော်လည်းပုံရိပ်နည်းပညာကိုတိကျစွာမမြင်နိုင်ရန်သို့မဟုတ်အကျိတ်များစွာကိုနေရာချထားရန်မစွမ်းနိုင်သည့်အပြင်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းပိုင်းရှိနေရာများသို့ပရိုတွန်များကိုမညွှန်ကြားနိုင်ခြင်းကလူနာအနည်းငယ်သာသာလျှင်ကုသမှုအတွက်သင့်လျော်သောကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ တွက်ချက်ထားသော tomography (မှန် CT)၊ သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (MRI) နှင့် positron ထုတ်လွှတ်မှု tomography (PET) အပါအ ၀ င်ပုံရိပ်တိုးတက်လာမှုသည်ယခုအခါဆေးသမားများအားကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းနက်ရှိုင်းစွာ“ မြင်နိုင်” နိုင်ပြီးကင်ဆာ၏တည်နေရာ၊ အရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္precာန်ကိုအတိအကျသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၎င်းစွမ်းရည်သည်ပရိုတွန်နည်းပညာတိုးတက်မှုများနှင့်အတူပရိုတွန်ကုထုံးကိုကင်ဆာအတွက်အရေးကြီးသောကုသမှုနည်းလမ်းအဖြစ်ယနေ့တိုးပွားလာစေခဲ့သည်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်ပထမဆုံးဆေးရုံအခြေပြုပရိုတွန်ကုသမှုစင်တာကို ၁၉၉၀ တွင် California ရှိ Loma Linda University Medical Center တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ 1946 စက်တင်ဘာလတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌စက်ရုံ ၂၈ ခုလည်ပတ်လျက်ရှိပြီး ၄ ခုထပ်မံဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်ထားသည်။9
ပရိုတွန်ကုထုံးကို ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင်ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ ဘာကလေရှိလူနာများကိုသုတေသနနယ်ပယ်တွင်ပထမဆုံးကုသခဲ့သည်။ ပရိုတွန်ကုထုံးသည်ကတိက ၀ တ်ပြုသော်လည်း CT, MRI နှင့် PET scan စသည့်ပုံရိပ်နည်းပညာတိုးတက်လာသည်အထိဆရာဝန်များကကင်ဆာအကျိတ်များ၏တည်နေရာ၊ အရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္accurာန်ကိုတိကျစွာ“ ကြည့်ရှု” နိုင်ခဲ့သည်။ အကျိတ်များကိုတိကျစွာနေရာချခြင်းကပရိုတွန်များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုရရှိစေသည်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်ပထမဆုံးပရိုတွန်ကုထုံးစင်တာကို ၁၉၉၀ တွင် Loma Linda University Medical Center တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ပထမဆုံးသောဆေးရုံအခြေပြုပရိုတွန်ကုထုံးကုသမှုစင်တာကို ၁၉၉၀ တွင်ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်နှင့်လူ ၃၅၀၀၀ နီးပါးသည်ယူနိုက်တက်စတိတ်နှင့်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်လူပေါင်း ၁၈၀,၀၀၀ ကျော်မှပရိုတွန်ကုထုံးကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။10 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကင်ဆာလူနာ ၂၅၀,၀၀၀ ခန့်သည်ပရိုတွန်ကုထုံးမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်သည်ဟုကျွမ်းကျင်သူများကခန့်မှန်းကြသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသုတေသီများသည်ပရိုတွန်ကုထုံး၏ထိရောက်မှုကိုလေ့လာခဲ့ကြသည်။ အခြားကင်ဆာကုသမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပရိုတွန်ကုထုံး၏အကျိုးကျေးဇူးနှင့်၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုလေ့လာမှုတစ်ခုတိုးလာသည်။ ပရိုတွန်ကုထုံးနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနပြုမှုပမာဏလျင်မြန်စွာတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှပရိုတွန်ကုထုံးစင်တာများပိုမိုဖွင့်လှစ်လာသည်နှင့်အမျှလူနာအတွေ့အကြုံများပိုမိုရရှိလာသည်။
Sပရိုတွန်ကုထုံး၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအတည်ပြုသော tudies များကိုတွေ့ရှိနိုင်သည် သုတေသန.
ပရိုတွန်ကုထုံးကိုဓာတုကုထုံးဖြင့်ကုသခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသမှုအတွက်နောက်ဆက်တွဲကုသမှုနှင့်စံဓာတ်မှန်ရောင်ခြည်ကုသမှုနှင့်ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ProCure ပရိုတွန်ကုထုံးဌာနသည်လူနာများအားထပ်မံကင်ဆာဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာများနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
ပရိုတွန်ကုထုံး၏ကုသမှုကာလအတွင်းသို့မဟုတ်ပြီးနောက်ဖြစ်နိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာယေဘုယျအားဖြင့်သေးငယ်သော၊ မကြာခဏနှင့်စံဓာတ်မှန်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးမှရရှိသောသူများထက်ပြင်းထန်မှုနည်းသည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်ကျန်းမာသောတစ်သျှူးများသည်ပရိုတွန်ကုထုံးတွင်ဓါတ်ရောင်ခြည်နှင့်ထိတွေ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်၏အကျိတ်၏တည်နေရာပေါ် မူတည်၍ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာကုသသောဒေသရှိပရိုတွန်ဓါတ်ရောင်ခြည်၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းတို့၏တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းတွင်အရေပြားယားယံခြင်းပါဝင်နိုင်သည်။ ကုသမှုကာလအတွင်းလူနာများအနေဖြင့်နာကျင်မှုသို့မဟုတ်အဆင်မပြေမှုကိုမခံစားရသင့်ပါ။ သင်၏ကုသမှုအစီအစဉ်ပေါ် မူတည်၍ သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သောတိကျသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုသင့်ဆရာဝန်ကသင်နှင့်ဆွေးနွေးလိမ့်မည်။
ပရိုတွန်ကုထုံးနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနပြုလုပ်နေဆဲလား။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းသည်ပရိုတွန်ကုထုံးနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနပြုမှုများဆက်လက်ပြုလုပ်နေသည်။ MD Anderson ကင်ဆာစင်တာနှင့်မက်ဆာချူးဆက်အထွေထွေဆေးရုံကြီးကဲ့သို့သောအဓိကအဖွဲ့အစည်းများသည်ပရိုတွန်ကုထုံးဖြင့်ကင်ဆာရောဂါကုသရာတွင်တိုးတက်မှုကိုရှာဖွေရန်အတွက်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများစွာရှိသည်။ ပရိုတွန်ကုထုံးကိုအထူးပံ့ပိုးသူများအနေဖြင့် ProCure Proton Therapy Centre သည်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများစွာတွင်ပါ ၀ င်နေသည်။ ဒီစမ်းသပ်မှုတွေအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြုပြီးငါတို့ဆီလည်ပတ်ပါ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု စာမျက်နှာ.
အချို့သောကင်ဆာများသည်ပရိုတွန်ကုထုံးအတွက် ပို၍ သင့်လျော်သည်။ သုတေသနသည်ပရိုတွန်များကိုကင်ဆာအကျိတ်အမျိုးအစားများစွာတွင်ဆက်လက်အသုံးပြုရန်အထောက်အကူပြုသော်လည်း၎င်းတို့သည်အဓိကအားဖြင့်:
သင်၏အခြေအနေကိုဖော်ပြမထားပါကသင်ပရိုတွန်ကုထုံးမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုစီစဉ်ရန်နှင့်ပရိုတွန်ကုထုံးသည်သင့်အတွက်သင့်လျော်သောကုသမှုနည်းလမ်းဖြစ်မလားကိုဆွေးနွေးရန်စင်တာသို့ဆက်သွယ်ပါ။
ပရိုတွန်ကုထုံးသည်ကင်ဆာအမျိုးအစားအားလုံးသို့မဟုတ်လူနာအားလုံးအတွက်မသင့်တော်ပါ။ ပရိုတွန်ကုထုံးသည်သတ်မှတ်ထားသောနှင့်နေရာဒေသအလိုက်ခိုင်မာသောအကျိတ်များကိုကုသရာတွင်အထိရောက်ဆုံးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အကျိတ် (metastasized) ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါကပရိုတွန်ကုထုံးသည် metastasis နှင့်အခြားအချက်များအတိုင်းအတာအပေါ် မူတည်၍ ကုသမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတစ် ဦး တည်းသာလူနာ၏ထူးခြားသောအခြေအနေအတွက်အကောင်းဆုံးချဉ်းကပ်မှုကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်ပရိုတွန်ကုထုံးကိုကုသမှုနည်းလမ်းအဖြစ်စိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်စကားပြောရန်သင့်အားအကြံဥာဏ်ပေးနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်နိုင်သည်။ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေစဉ်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာအထူးကုသည်သင်နှင့်မတူညီသောကုသမှုနည်းလမ်းများကိုဆွေးနွေးလိမ့်မည်။ ProCure မှဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာပညာရှင်များသည်ပရိုတွန်ကုထုံးအပြင်ကင်ဆာရောဂါကိုကုသရန်အမျိုးမျိုးသောဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုအသုံးပြုကြသောကြောင့်သင့်အားအကောင်းဆုံးကုသမှုထောက်ခံချက်ပေးလိမ့်မည်။
ပရိုတွန်ကုထုံးသည်အထူးသဖြင့်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးလိုအပ်သောကလေးများအတွက်အထူးထိရောက်ပြီးကလေးလူနာများတွင်ဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြန့်ဝေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ လက်တွေ့လေ့လာမှုများကပရိုတွန်ကုထုံးသည်ကြီးထွားမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဖြစ်ပွားနိုင်သောဒုတိယကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့နည်းစေသည်ဟုဖော်ပြသည်.3,5,10 ကလေး၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်သဖြင့်အနီးအနားရှိကျန်းမာသောတစ်ရှူးများနှင့်ပုံမှန်ဓာတ်မှန်ရောင်ခြည်မှကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ဤပျက်စီးမှုသည်ကြီးထွားမှုပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း၊ အိုင်ကျူနိမ့်ကျမှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အခြားပြcauseနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။11 ကလေး၏ဘ ၀ တွင်အကျိတ်အသစ်များလည်းပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။ ကြီးထွားလာနေသောသုတေသနပြုချက်တစ်ခုသည်ပရိုတွန်ကုထုံးကိုကလေးများအတွက်အသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်များကိုအတည်ပြုပေးသည်။ အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ ကလေးကင်ဆာကုသ ပရိုတွန်ကုထုံးနှင့်အတူ။
ပရိုတွန်ကုထုံးကိုပုံမှန် X-Ray ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးဖြင့်မကုသနိုင်သည့်ထပ်တလဲလဲဖြစ်ပွားသောကင်ဆာများကိုကုသနိုင်သည်။ လူနာများသည်ပရိုတွန်ကုထုံးကိုဘုတ်အဖွဲ့မှသတ်မှတ်ထားသောဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာပညာရှင်နှင့်ဆွေးနွေးသင့်သည်၊ ၎င်းသည်အကျိုးရှိနိုင်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ပရိုတွန်ကုထုံးသည်သင်ပုံမှန်ဓါတ်ရောင်ခြည်ဓါတ်ရောင်ခြည်သင့်စေပြီး ထပ်မံ၍ မရရှိနိုင်ပါကကုသမှုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ပရိုတွန်များနှင့်ပုံမှန် X-Ray ရောင်ခြည်နှိုင်းယှဉ်
ပရိုတွန်ကုထုံးနှင့်ဓာတ်မှန်ရောင်ခြည်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးသည်ကင်ဆာဆဲ (လ်) များကိုခွဲထုတ်။ ပွားများရန်ကြိုးစားသောအခါကင်ဆာကိုကုသသည်။ သို့သော်အရေးကြီးသောခြားနားချက်ရှိသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဓာတ်ရောင်ခြည်ဓါတ်ရောင်ခြည်ဟာအရေပြားကိုထိုးဖောက်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့အများဆုံးဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုအမြန်ဆုံးထုတ်လွှတ်ပေးပြီး၊ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိတ်ထက်ကျော်လွန်သွားတဲ့အခါမှာဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်သျှူးတွေမလိုချင်တဲ့ဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုပိုမိုဖော်ထုတ်နိုင်ပြီး၊ ကုထုံး။ ပရိုတွန်ကုထုံးသည်အကျိတ်များသောနေရာ၌ဓါတ်ရောင်ခြည်အများစုကိုကယ်လွှတ်ပြီးရပ်တန့်စေပါသည်။ ကုသမှုareaရိယာကိုရောက်ရှိပြီးဖုံးလွှမ်းသွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကင်ဆာအကျိတ်မှထွက်သောဓါတ်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုမရှိတော့ပါ။ ပရိုတွန်ကုထုံးဖြင့်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအလွန်နည်းသောဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုကျန်းမာသန်စွမ်းသည့်တစ်ရှူးများသို့ပို့သည်။
ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းနှင့်ပရိုတွန်များသည်ကင်ဆာအကျိတ်များကိုဖျက်ဆီးရာတွင်တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ခြားနားချက်မှာဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်တစ်ရှူးများကိုပျက်စီးစေသည်။ ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဖြင့်အရေပြားကိုထိုးဖောက်ပြီးမကြာမီသူတို့၏အမြင့်ဆုံးဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုထုတ်လွှတ်ပေးသည်။ ကျန်းမာသောတစ်သျှူးများနှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုအကျိတ်သို့ရောက်သောအခါ၎င်းတို့နောက်မှခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်ဖြတ်သန်းသွားသောအခါဖြစ်နိုင်သည်။ ပရိုတွန်များသည်သူတို့၏စွမ်းအင်အများစုကိုအကျိတ်သို့ရောက်သောအခါတိကျစွာညွှန်ကြားနိုင်သည်။ ပရိုတွန်များနှင့်ကျန်းမာသောတစ်ရှူးများနှင့်ထိတွေ့မှုနည်းပါးသောကြောင့်များသောအားဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးပမာဏကိုပေးပို့နိုင်ပြီးကင်ဆာကုသမှုကိုပိုမိုထိရောက်စေသည်။1
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပရိုတွန်ထုပ်များသည်သူတို့၏စွမ်းအင်ကိုများသောအားဖြင့်အကျိတ်တွင်တိုက်ရိုက်သိုလှောင်ထားသဖြင့်ဓါတ်ရောင်ခြည်နည်းခြင်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိကျန်းမာသောတစ်ရှူးဆီသို့ရောက်သည်။1 ဤသည်ရေတိုနှင့်ရေရှည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏အန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ ထို့အပြင်အကျိတ်တွင်တိုက်ရိုက်ဓါတ်ရောင်ခြည်ပိုများနိုင်သောကြောင့်ပရိုတွန်ကုထုံးဖြင့်အချို့သောကင်ဆာများကိုကုသရာတွင်ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးပမာဏကိုထုတ်ပေးနိုင်သည်။1
ပရိုတွန်ကုထုံးကို Medicare နှင့်ပုဂ္ဂလိကအာမခံပံ့ပိုးပေးသူများကလွှမ်းခြုံထားသည်။ စင်တာတွင်သင့်အားအာမခံလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့်သင့်အားလမ်းညွှန်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်ဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးများရှိသည်။ သင်၏အာမခံကုမ္ပဏီမှပေးသောအကျိုးခံစားခွင့်များ (ပူးတွဲပေးချေခြင်း၊ နှုတ်ယူခြင်း၊ အိတ်ဆောင်ကုန်ကျစရိတ်များကဲ့သို့) ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သင်နှင့်အတူလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ လွှမ်းခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ၊ သင်၏အာမခံအစီအစဉ်၊ အုပ်စုနံပါတ်နှင့်အသင်းဝင် ID ကိုအဆင်သင့်ရှိပါစေ။ စင်တာသို့ရောက်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အာမခံကုမ္ပဏီမှရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စားသုံးသူအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး သည်အဆက်အသွယ်ရှိလိမ့်မည်။
ပရိုတွန်ကုထုံးသည်အဆင့်မြင့်ဓါတ်ရောင်ခြည်ပုံစံဖြစ်ပြီးကင်ဆာဆဲ (လ်) များအား၎င်းတို့အားကွဲပြားခြင်းနှင့်ကြီးထွားခြင်းမှကာကွယ်ပေးခြင်းဖြင့်ဖျက်ဆီးသည်။ ပရိုတွန်ကုထုံးသည်ပုံမှန်ဓါတ်မှန်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးတွင်အသုံးပြုသောဖိုတွန်အစားပရိုတွန်များ - အပြုသဘောဖြင့်အားသွင်းထားသောအက်တမ်အမှုန်များကိုအသုံးပြုသည်။ ပရိုတွန်ကုထုံးဖြင့်ဆရာဝန်များသည်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ကျန်းမာသည့်တစ်သျှူးများကိုပျက်စီးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်အကျိတ်ကိုတိကျစွာပစ်မှတ်ထားနိုင်သည်။ ပုံမှန်ဓါတ်ရောင်ခြည်ဓါတ်ရောင်ခြည်နှင့်မတူဘဲပရိုတွန်များသည်သူတို့၏ဓါတ်ရောင်ခြည်အမြောက်အများကိုအကျိတ်ထဲတိုက်ရိုက်ထည့်ပြီးရပ်လိုက်သည်။
များသောအားဖြင့်သင့်အားဆီးကျိတ်ကင်ဆာနှင့်အခြားကျန်းမာရေးအချက်များပေါ် မူတည်၍ တစ်ပတ်လျှင်ငါးရက်ခန့်ရှစ်ပတ်အထိကုသပေးသည်။ တစ်ပတ်မှ ၅ ပတ်အထိကုသမှုတိုတောင်းသောလူနာအုပ်စုများအတွက်ရရှိနိုင်သည်။ အများအားဖြင့်၊ သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မှီနဲ့အပြီးမှာသင့်ရဲ့ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
ဟုတ်တယ်။ ပရိုတွန်ကုထုံးကိုအခြားကင်ဆာရောဂါကုသမှုအမျိုးမျိုးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာဟော်မုန်းကုထုံး၊ brachytherapy နှင့် / သို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ကုသမှုနောက်ဆက်တွဲ။
ဆေးကုသမှုခံယူပြီးနောက်ညတွင်နေစရာမလိုပါသို့မဟုတ်ဗဟိုတွင်ရှိနေရန်မလိုအပ်ပါ။ အများအားဖြင့်၊ သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မှီနဲ့အပြီးမှာသင့်ရဲ့ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
ကင်ဆာနောက်ကွယ်မှသာမန်တစ်ရှူးများသို့ရောင်ခြည်သည်ပစ်မှတ်အကျိတ်မှတစ်ဆင့်ထိုးဖောက်သည့်သမားရိုးကျဓါတ်ရောင်ခြည်ကုသမှုနှင့်မတူဘဲပရိုတွန်ထုပ်များသည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောတစ်သျှူးများသို့မရောက်ရှိစေဘဲသူတို့၏အကျိတ်ကိုအပ်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။ Pencil beam scanning သည်ဒီထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိကိုအီလက်ထရွန်နစ်လမ်းညွှန်မှုဖြင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည့်စနစ်နှင့်ပေါင်းစပ်။ ခဲတံအမြှေးပါးရောင်ခြည်ကိုကင်ဆာအထူ၏အလွှာတစ်လျှောက်တွင်လှည့်ပတ်သွားစေသည်။ ၎င်းသည်ဓါတ်ရောင်ခြည်ဖြင့်ရှုထောင့်သုံးမျိုးဖြင့်အကျိတ်ကို“ ဆေးသုတ်” ပြီးကင်ဆာ၏အခြားဘက်ခြမ်းရှိတစ်ရှူးများသို့ထိုးခြင်းကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ခဲတံရောင်ခြည်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှု၏အလွန်တိကျမှန်ကန်မှုသည်ဆီးကြိတ်နှင့်ဆီးအိမ်ထဲသို့ဓါတ်ရောင်ခြည်ပမာဏကိုလျှော့ချသောကြောင့်၎င်းသည်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအတွက်အကောင်းဆုံးကုသမှုဖြစ်စေသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်.
SpaceOAR® Hydrogel ဆိုတာဘာလဲ။
SpaceOAR® Hydrogel သည်ခေတ္တထိုးဆေးထိုးထားသောဂျယ်လ်ဖြစ်ပြီးဆီးကျိတ်ကင်ဆာအတွက်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးခံနေရသောအမျိုးသားများတွင် rectum ကိုကာကွယ်ပေးပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလျော့နည်းစေသည်။ အဆိုပါ SpaceOAR စနစ်သည်စကိတ်ကြိုးအဖြစ်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် rectal ဒဏ်ရာကိုလျော့နည်းစေသည် - rectum ကိုဆီးကြိတ်နှင့်ပရိုတင်းပမာဏများသောဓါတ်ရောင်ခြည်ဒေသမှတွန်းထုတ်သည်။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်နဂိုအတိုင်းအကွာအဝေးကိုထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်မှုနည်းစဉ်အတွင်းထိုးသွင်းပြီးလူနာများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းကိုမခံစားရပါ။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်သည်လုံခြုံပြီး ဦး နှောက်ခွဲစိတ်ခြင်း၊ နှလုံးအထူးကုနှင့်မျက်လုံးကုသခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောအခြားထုတ်ကုန်များနှင့်ဆင်တူသည်။ ၎င်းသည်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုသမှုကာလအတွင်းသုံးလကြာအောင်တည်ရှိပြီး၎င်းကိုစုပ်ယူပြီးလူနာ၏ဆီးထဲတွင်ခန္ဓာကိုယ်မှထွက်ခွာစေပြီးဘာမှမကျန်ရှိတော့ပါ။ SpaceOAR စနစ်သည်ဆေးခန်းတွင်သက်သေပြခဲ့ပြီး US Clinical Trial တွင်လေ့လာခဲ့ပြီး US တွင်ရောင်းချရန် FDA အားရှင်းလင်းပြီးဖြစ်သည်။ ProCure မှသမားတော်များသည်ဟိုင်ဒရို၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအတည်ပြုရန်ရှေ့ဆောင်ဆရာဝန်များဖြစ်ကြသည်။
ပရိုတွန်ကုထုံးကို Medicare နှင့်ပုဂ္ဂလိကအာမခံပေးသူများစွာတို့ကလွှမ်းခြုံထားသည်။ ProCure စင်တာတစ်ခုစီတွင်ဘဏ္processာရေးဆိုင်ရာတိုင်ပင်သူတစ် ဦး ရှိသည်။ သင်လွှမ်းခြုံနှင့်ပတ်သက်။ မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ပရိုတွန်ကုထုံးနှင့်ဓာတ်မှန်ရောင်ခြည်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးနှစ်ခုလုံးသည်သွေးခွဲရန်နှင့်မျိုးပွားရန်ကြိုးစားသောအခါကင်ဆာဆဲလ်များကိုသတ်ခြင်းဖြင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကိုကုသသည်။ သို့သော်အရေးကြီးသောခြားနားချက်ရှိသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဓာတ်ရောင်ခြည်ဓါတ်ရောင်ခြည်ဟာအရေပြားကိုထိုးဖောက်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့အများဆုံးဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုအမြန်ဆုံးထုတ်လွှတ်ပေးပြီး၊ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိတ်ထက်ကျော်လွန်သွားတဲ့အခါမှာဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်သျှူးတွေမလိုချင်တဲ့ဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုပိုမိုဖော်ထုတ်နိုင်ပြီး၊ ကုထုံး။ ပရိုတွန်ကုထုံးသည်အကျိတ်နေရာ၌ဓါတ်ရောင်ခြည်များစွာကိုလွှတ်ပေးပြီးရပ်လိုက်သည်။ ကုသမှုareaရိယာကိုရောက်ရှိပြီးဖုံးလွှမ်းသွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကင်ဆာအကျိတ်မှထွက်သောဓါတ်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုမရှိတော့ပါ။ ၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိကျန်းမာသောတစ်သျှူးများပျက်စီးမှုကိုလျော့ချပေးပြီးပရိုတွန်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုအကျိတ်ကိုပစ်မှတ်ထားစေသည်။3
ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအတွက်ဆီးအိမ်နှင့် rectum သို့ဓါတ်ရောင်ခြည်လျော့နည်းမှုကိုဆိုလိုသည်။ ဖလော်ရီဒါတက္ကသိုလ်မှပရိုတွန်ကုထုံးဌာန၌ပြုလုပ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ပရိုတွန်ကုထုံးသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဆီးအိမ်အတွင်းသို့ဓါတ်ရောင်ခြည် ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ပုံမှန်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၅၉ ရာခိုင်နှုန်းသည် rectum သို့ပို့လွှတ်သည်။4
ဟုတ်တယ်။ ဖလော်ရီဒါတက္ကသိုလ်မှပရိုတွန်ကုထုံးဌာနမှလေ့လာမှုတစ်ခုအရအစောပိုင်းနှင့်အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိဆီးကျိတ်ကင်ဆာရှိသူ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အဆင့်မြင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာရှိသည့်အမျိုးသား ၇၆ ရာခိုင်နှုန်းသည်ပရိုတွန်ကုထုံးအပြီးငါးနှစ်အကြာတွင်ကင်ဆာရောဂါကင်းစင်ကြသည်။6 ဤရလဒ်သည်ခွဲစိတ်မှုသို့မဟုတ်အခြားဓါတ်ရောင်ခြည်အမျိုးအစားများဖြင့်ရရှိသောရလဒ်များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနှိုင်းယှဉ်မှု။
Massachusetts အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံအဆင့် (၃) တွင်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၏အစောပိုင်း၊ အလယ်အလတ်အဆင့်နှင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်ရှိလူနာ ၃၉၃ ယောက်အားလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်လူနာ ၉၁.၃ ရာခိုင်နှုန်းသည်ပရိုတွန်ကုထုံးကိုမြင့်မားသောဆေးများဖြင့်ကုသသည့်အခါငါးနှစ်အတွင်းကင်ဆာမကင်းခဲ့ကြပါ။6,7
ပရိုတွန်ကုထုံးသည်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကိုမြင့်မားစေသည်။7 လေ့လာမှုတစ်ခုအရအန္တရာယ်များသောအုပ်စုအားလုံးရှိအမျိုးသား ၉၁.၃ ရာခိုင်နှုန်းသည်ကင်ဆာရောဂါကင်းစင်ကြောင်း (ဆီးကျိတ်အထူးပြုသည့်အန်တီဂျင် (PSA)) တိုးတက်မှုမရှိ (၅) နှစ်ကြာသည်။6 နောက် ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်းအန္တရာယ်နိမ့်အုပ်စုရှိလူနာများအတွက်လည်းကင်ဆာရောဂါကင်းစင်နှုန်းမြင့်မားစွာထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဥပမာ၊ ၉၂.၉ ရာခိုင်နှုန်းသောအမျိုးသားများသည်ပရိုတွန်ကုထုံးကိုကုသမှုခံယူပြီး ၁၀ နှစ်အကြာတွင်ကင်ဆာရောဂါခံစားခဲ့ရသည်။7
ပရိုတွန်ကုထုံး၏ကုသမှုနှုန်းသည်ပြင်းထန်မှု -Modulated Radiation Therapy (IMRT) ၏ကုသမှုနှုန်းနှင့်မည်သို့နှိုင်းယှဉ်သနည်း။
Proton ကုထုံးသည် brachytherapy နှင့် IMRT အပါအ ၀ င်အခြားကင်ဆာကုသမှုများနှင့်ကုသမှုနှုန်းမြင့်မားသည်။ ခြားနားချက်မှာ IMRT ကဲ့သို့သောပုံမှန် X-Ray ကုထုံးများသည်ဆီးကြိတ်ဝန်းကျင်ရှိပုံမှန်တစ်ရှူးများသို့ဓါတ်ရောင်ခြည်ပိုမိုပို့လွှတ်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။8 ပရိုတွန်ကုထုံးဖြင့် rectum နှင့်ဆီးအိမ်အပါအဝင်အရေးပါသောအဆောက်အ ဦ များသို့ဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချပေးပြီး rectal နှင့် genitourinary ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။6,10,11,12 ဟားဗတ်ကင်ဆာစင်တာမှစုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက ဦး ဆောင်သည့်အမျိုးသားစစ်ဆေးမှုသည်ကျန်းမာသောတစ်ရှူးများနှင့်ထိတွေ့မှုလျော့ကျခြင်းသည်ပရိုတွန်ကုထုံးအပြီးတွင်လူနာများရေရှည်အသက်တာ၏အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေနိုင်မနိုင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ လေ့လာမှုများအရပရိုတွန်များနှင့်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကြောင့်ဖြစ်သောကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့နည်းစေသည်။
လူနာအများစုသည်ပရိုတွန်ကုထုံးဖြင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုမခံစားရပါ။ အနည်ထိုင်ခြင်းနှင့်မကြာခဏဆီးသွားခြင်းကဲ့သို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်ပါက၎င်းတို့သည်အများအားဖြင့်အသေးစားနှင့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ကြသည်။ ရေရှည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအရပရိုတွန်ကုထုံးသည်အလွန်တိကျသောကြောင့်ဆီးအိမ်သို့မဟုတ်အူသိမ်အူမကြီးပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်ပရိုတွန်ကုထုံးသည်ခွဲစိတ်ခြင်းကဲ့သို့သောကုသမှုနည်းလမ်းများနှင့်ဆက်နွယ်သောမထိန်းနိုင်ခြင်းနှင့်ခွန်အားမရှိခြင်းကဲ့သို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုလျော့နည်းစေသည်။
ဆီးကျိတ်ကင်ဆာရှိသူအများစုသည်ပရိုတွန်ကုထုံးအတွက်အကောင်းဆုံးသောသူများဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ပရိုတွန်ကုထုံးကိုကုသမှုနည်းလမ်းအဖြစ်စိတ်ဝင်စားလျှင် ProCure ရှိဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာပညာရှင်နှင့်စကားပြောရန်သင့်အားအကြံဥာဏ်ပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်နိုင်သည်။ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးစဉ်အတွင်းဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာအထူးကုသည်သင်နှင့်ပရိုတွန်ကုထုံးမှသင်အကျိုးရနိုင်မနိုင်ဆုံးဖြတ်ရန်သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ ProCure မှဓါတ်ရောင်ခြည်အထူးကုဆရာဝန်များသည်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကိုကုသရန်ဓါတ်ရောင်ခြည်ပုံစံအားလုံးကို သုံး၍ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သောဘက်မလိုက်သောကုသမှုအကြံပြုချက်ကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။
လက်ရှိ ProCure တွင်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအတွက်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်နေသည်။
ဆီးကျိတ်ကင်ဆာလူနာများကိုပရိုတွန်ကုထုံးဖြင့်ကုသမှုကိုပြင်းထန်သောမော်ဂျူလာဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံး (IMRT) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဆုံးဖြတ်ရန်လေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့်ဘဝ၏အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေခဲ့သည်။
ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးနှစ်မျိုးနှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအဆင့် ၁ သို့မဟုတ် ၂ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာရောဂါရှိသူအမျိုးသားများအတွက်လေ့လာမှုတစ်ခု - ပြင်းထန်မှု - ပုံစံပြုဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံး (IMRT) နှင့်ပရိုတွန်ရောင်ခြည်ကုထုံး (PBT) ။ ၎င်းသည်ပရိုတွန်ကုထုံးသည်အူသိမ်၊ ဒီလေ့လာမှုကိုဟားဗတ်ကင်ဆာစင်တာမှစုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက ဦး ဆောင်လျက်ရှိပြီးအမျိုးသားကင်ဆာဌာနမှထောက်ပံ့သည်။
သွားရောက်ကြည့်ရှုပေးပါ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည်။
သင့် ဦး နှောက်အကျိတ်ရောဂါပေါ် မူတည်၍ ကုသမှုကိုများသောအားဖြင့်တစ်ပတ်လျှင် ၅ ရက် 5-4 ပတ်အထိကုသပေးသည်။ ကုသမှုတစ်ခုချင်းစီသည် ၁၅ မိနစ်မှ ၆၀ မိနစ်ခန့်အထိရှိနိုင်သော်လည်းအမှန်တကယ်ပရိုတွန်ပေးပို့မှုသည်စက္ကန့် ၆၀ သာရှိသည်။
ဟုတ်တယ်။ ပရိုတွန်ကုထုံးကိုသမားရိုးကျဓါတ်ရောင်ခြည်၊ ဓာတုကုထုံး၊ ဟော်မုန်းကုထုံးနှင့် / သို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ကုသမှုတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ProCure Proton ကုထုံးဌာနသည်မည်သည့် ဦး နှောက်အကျိတ်များကုသသနည်း။
ပရိုတွန်ကုထုံးအတွက်သင့်လျော်သော ဦး နှောက်အကျိတ်များမှာ4
ကလေး ဦး နှောက်ကင်ဆာ
မှုများထပ်တလဲလဲ ဦး နှောက်အကျိတ်
ဦး နှောက်၏သွေးလွှတ်ကြောပုံသဏ္ဌာန် (AVMs) များကိုပရိုတွန်များဖြင့်လည်းကုသနိုင်သည်။ သင်၏အခြေအနေကိုဖော်ပြမထားပါကသင်ပရိုတွန်ကုထုံးမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုစီစဉ်ရန်နှင့်ပရိုတွန်ကုထုံးသည်သင့်အတွက်သင့်လျော်သောကုသမှုနည်းလမ်းဖြစ်မလားကိုဆွေးနွေးရန်စင်တာသို့ဆက်သွယ်ပါ။
ပရိုတွန်ကုထုံးကို Medicare နှင့်ပုဂ္ဂလိကအာမခံပံ့ပိုးပေးသူများကလွှမ်းခြုံထားသည်။ ProCure ရှိတယ် သင့်အားအာမခံလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့်သင့်အားလမ်းညွှန်ပေးရန်ရည်ရွယ်ထားသောဘဏ္counselာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးများ။ သင်လွှမ်းခြုံနှင့်ပတ်သက်။ မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ပရိုတွန်ကုထုံးနှင့်ဓာတ်မှန်ရောင်ခြည်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးနှစ်ခုလုံးသည်သွေးခွဲရန်နှင့်မျိုးပွားရန်ကြိုးစားသောအခါအကျိတ်ဆဲလ်များကိုဖျက်ဆီးခြင်းဖြင့် ဦး နှောက်အကျိတ်များကိုကုသသည်။ သို့သော်အရေးကြီးသောခြားနားချက်ရှိသည်။ X-Ray ဓါတ်ရောင်ခြည်သည်အရေပြားကိုထိုးဖောက်ပြီးနောက်အမြန်ဆုံးဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုထုတ်လွှတ်ပြီးသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိတ်ကျော်လွန်သွားသည်နှင့်အမျှဆဲလ်များများကိုမလိုချင်တဲ့ဓါတ်ရောင်ခြည်များနှင့်ထိတွေ့မိပြီးကျန်းမာသန်စွမ်းသောတစ်သျှူးနှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုပိုမိုပျက်စီးစေသည့်အခါဓါတ်ရောင်ခြည်ဆက်လက်ထုတ်လွှတ်သည်။
ပရိုတွန်ကုထုံးသည်အကျိတ်များသောနေရာ၌ဓါတ်ရောင်ခြည်အများစုကိုကယ်လွှတ်ပြီးရပ်တန့်စေပါသည်။ ကုသမှုareaရိယာကိုရောက်ရှိပြီးဖုံးလွှမ်းသွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကင်ဆာအကျိတ်မှထွက်သောဓါတ်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုမရှိတော့ပါ။ ၎င်းသည်ဓါတ်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုနှင့်ပုံမှန် ဦး နှောက်တစ်သျှူးများ၊ မျက်လုံးများနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာအာရုံကြောများကိုပျက်စီးစေနိုင်မှုကိုလျော့ချပေးပြီးပရိုတွန်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုခွင့်ပြုသည်။5,6
ဟုတ်တယ်။ ဆွစ်ဇာလန်တောင်ပိုင်းကင်ဆာပညာဌာနမှလေ့လာမှုတစ်ခု (ဓါတ်ရောင်ခြည်နှင့်ကင်ဆာပညာရပ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်) - သေးငယ်သော ဦး နှောက်ကိုတွေ့ရှိရပါသည် (အများဆုံး ဦး နှောက်ကို stem irradiation IMRT နှင့်အတူ 60% ကနေပရိုတွန်နှင့်အတူ) ပရိုတွန်ကုထုံးဥရောပထိခိုက်ကုထုံး radiology နှင့်ကင်ဆာများအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းဂျာနယ်) ပရိုတွန်ကုထုံးထိတွေ့တစ်သျှူးနှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါချွေတာအတွက်စံဓါတ်ရောင်ခြည်ထက်သာလွန်ခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။6
ပရိုတွန်ကုထုံးသည် ဦး နှောက်အကျိတ်များအတွက်ထိရောက်သောကုသမှုဖြစ်ကြောင်းပြသသည့်လက်တွေ့အချက်အလက်ရှိပါသလား။
ဟုတ်တယ်။ Paul Scherrer Institute မှလေ့လာမှုတစ်ခုအရပရိုတွန်ကုထုံးဖြင့်ကုသသော intracranial meningiomas လူနာများ၏ရှင်သန်မှုနှုန်းသည် ၉၂.၇% အထိရှိခဲ့သည်။7
အမှန်တကယ်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုသမှုကာလအတွင်းအဆင်မပြေမှုသို့မဟုတ်အာရုံခံစားမှုမရှိပါ။ ဦး နှောက်အကျိတ်လူနာအများစုသည်ပရိုတွန်ကုထုံး၏အနည်းငယ်သို့မဟုတ်အလွန်နူးညံ့သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိသည်။ မည်သည့်ပျော့ပျောင်းသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုလိုအပ်ပါကဆေးများဖြင့်စီမံနိုင်သည်။ လူနာအများစုသည်ဆက်လက်တက်ကြွ။ ပုံမှန်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။
ညင်သာပျော့ပျောင်း (ကင်ဆာမဟုတ်သော) နှင့်ကင်ဆာ (ကင်ဆာ) ဦး နှောက်အကျိတ်နှင့်အတူအဓိကလူနာပရိုတွန်ကုထုံးအတွက်ကောင်းသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဖြစ်ကြသည်။ အကယ်၍ သင်ပရိုတွန်ကုထုံးကိုကုသမှုနည်းလမ်းအဖြစ်စိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်စကားပြောရန်သင့်အားအကြံဥာဏ်ပေးနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်နိုင်သည်။ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေစဉ်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာအထူးကုသည်သင်နှင့်မတူညီသောကုသမှုနည်းလမ်းများကိုဆွေးနွေးလိမ့်မည်။ ProCure မှဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာပညာရှင်များသည်ပရိုတွန်ကုထုံးအပြင်အဆုတ်ကင်ဆာကိုကုသရန်အမျိုးမျိုးသောဓါတ်ရောင်ခြည်များကိုအသုံးပြုကြရာသင့်အားအကောင်းဆုံးကုသမှုထောက်ခံချက်ပေးလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့် (၁) ဖြစ်သည့်ရင်သားမဟုတ်သောရင်သားကင်ဆာကိုကုသပေးသည်။ mastectomy သို့မဟုတ် lumpectomy ပြီးနောက်လက်ဝဲသို့မဟုတ်ညာဘက်ရှိရင်သားကင်ဆာကိုကျွန်ုပ်တို့ကုသသည်။
မဟုတ်ပါ၊ ပရိုတွန်ကုထုံးသည်ဓာတုကုထုံးသို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ကုသမှုလိုအပ်ချက်ကိုအစားမထိုးပါ။ လူနာများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဓာတုကုထုံးဖြင့်သို့မဟုတ်ပရိုတွန်ကုထုံးဖြင့်သူတို့ရရှိသောအခြားကုထုံးများသို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်ပရိုတွန်ကုထုံးကိုခံယူကြသည်။
ကျွန်ုပ်တွင်ရင်သားကင်ဆာ implants ရှိလျှင်သို့မဟုတ်ရင်သားကင်ဆာပြန်လည်တည်ဆောက်လိုပါကပရိုတွန်ကုထုံးကိုကျွန်ုပ်ရရှိနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်တယ်။ အချို့လူနာများသည်ပရိုတွန်ကုထုံးမကုသမီရင်သားကင်ဆာ implant ကိုထားရှိနိုင်ပြီးအချို့သည်ပရိုတွန်ကုထုံးပြီးသည်အထိစောင့်ရမည်။ သင်၏ပြန်လည်ခွဲစိတ်ကုသမှုနှင့်ပရိုတွန်ကုထုံး၏အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်သင့်ရင်သားကင်ဆာနှင့်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာပညာရှင်နှင့်ဆွေးနွေးပါ။
ပရိုတွန်ကုထုံးကိုအကျိတ်သို့ပို့ရန်အချိန်ကုန်ခြင်းသည်တစ်မိနစ်သို့မဟုတ်နှစ်နာရီမျှသာကြာသော်လည်းကုသမှုတစ်ခုလုံးသည်မိနစ် ၃၀ မှ ၆၀ အထိကြာနိုင်သည်။ ကုသမှုကိုများသောအားဖြင့်သင့်ကင်ဆာနှင့်အခြားအချက်များပေါ် မူတည်၍ တစ်ပတ်လျှင် ၅ ရက်၊ ၃ မှ ၇ ပတ်အထိပေးသည်။
လူနာအများစုသည်ကုသမှုခံယူစဉ်နာကျင်မှု၊ လူနာများအနေဖြင့်ကုသမှုခန်းတွင်အချိန်ဖြုန်းခြင်းသည်ကုသမှုခံယူရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုသမှုခံယူသူများသည်ကုသမှုမစတင်မီသင့်အတွက်အဆင်သင့်ရှိနေပါလိမ့်မည်။ FDA မှခွင့်ပြုထားသောစက်ရုပ်တည်နေရာကို အသုံးပြု၍ ကုသမှုတစ်ခုစီမတိုင်မီသင့်ကိုနေရာချထားပေးလိမ့်မည်။ သင်၏ကုထုံးဆရာများကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်စဉ်သင့်အားကုတင်ပေါ်တွင်အိပ်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ သင်အနေအထားရောက်သောအခါပရိုတွန်ရောင်ခြည်ကိုပေးပို့ပြီးတစ်မိနစ်ခန့်ကြာသည်။ မင်းကပရိုတွန်ရောင်ခြည်ကိုမခံစားရဘူး။ သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိပစ္စည်းမှခလုတ်အချို့ကိုသင်ကြားကောင်းကြားနိုင်သော်လည်းများသောအားဖြင့်၊ ကုသမှုအနည်းငယ်ပြုလုပ်ပြီးနောက်အသံများသည်သတိမပြုမိဘဲဖြစ်သွားနိုင်သည်။ အမှန်တကယ်ကုသမှုခံယူနေစဉ်အတွင်းသင့်ကုထုံးဆရာများသည်အခန်းမှထွက်လာပြီးသင်၏ကုသမှုကိုကုသမှုအခန်းပြင်ပရှိထိန်းချုပ်ခန်းမှစောင့်ကြည့်လိမ့်မည်။ သူတို့သည်သင့်အခန်းနှင့်မတူသော်လည်းဗွီဒီယိုမော်နီတာမှတဆင့်သင့်ကိုမြင်နိုင်၊ ကြားနိုင်သည်။ သူတို့ဟာနီးကပ်နေပြီးသင်လိုအပ်လျှင်လိုအပ်လျှင်သင်အလွယ်တကူစကားပြောနိုင်သည်။
ဆေးကုသမှုခံယူပြီးနောက်ညတွင်နေစရာမလိုပါသို့မဟုတ်ဗဟိုတွင်ရှိနေရန်မလိုအပ်ပါ။ အများအားဖြင့်၊ သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မှီနဲ့အပြီးမှာသင့်ရဲ့ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ လူနာအများစုသည်ပရိုတွန်ကုထုံးမှပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းကဲ့သို့အနည်းငယ်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုခုကြုံတွေ့ရပါကလိုအပ်လျှင်ဆေးဝါးများဖြင့်စီမံနိုင်သည်။
ရင်သားကင်ဆာရှိသူအများစုသည်ပရိုတွန်ကုထုံးအတွက်အကောင်းဆုံးသောသူများဖြစ်သည် သင်၏ကုသမှုတွင်ပရိုတွန်ကုထုံး၏အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုနားလည်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေစဉ်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာပညာရှင်သည်သင်နှင့်မတူညီသောကုသမှုနည်းလမ်းများကိုဆွေးနွေးလိမ့်မည်။ သင်ပရိုတွန်ကုထုံးမှသင်အကျိုးရနိုင်ခြေရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ ProCure မှဓါတ်ရောင်ခြည်အထူးကုဆရာဝန်များသည်ရင်သားကင်ဆာကိုကုသရန်အတွက်ဓါတ်ရောင်ခြည်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်သင့်အားသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်သင့်အားကုသမှုပေးလိမ့်မည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားခေါ်ဆိုပါ More Information ကိုတောင်းဆိုခြင်း အွန်လိုင်း။
ပရိုတွန်ကုထုံးကို Medicare နှင့်ပုဂ္ဂလိကအာမခံပံ့ပိုးပေးသူများကလွှမ်းခြုံထားသည်။ ProCure တွင်အာမခံလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့်သင့်အားလမ်းညွှန်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာတိုင်ပင်သူများရှိသည်။ သူတို့သည်သင့်အားပျော်ရွှင်စွာလမ်းပြပေးမည်ဖြစ်ပြီးအာမခံလွှမ်းခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၌ရှိနိုင်သောမည်သည့်မေးခွန်းများကိုမဆိုဖြေကြားလိမ့်မည်။
တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေစဉ်အတွင်း ProCure မှဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာပညာရှင်သည်သင်နှင့်မတူညီသောကုသမှုနည်းလမ်းများကိုဆွေးနွေးလိမ့်မည်။ ProCure မှဓါတ်ရောင်ခြည်အထူးကုဆရာဝန်များသည်ပရိုတွန်ကုထုံးအပြင်ရင်သားကင်ဆာကိုကုသရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသောဓါတ်ရောင်ခြည်များကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်သင့်အားစစ်ဆေးရန်အတွက်သင့်အားကုသမှုထောက်ခံချက်ပေးလိမ့်မည်။
ပရိုတွန်များသည်သူတို့၏စွမ်းအင်ကိုကင်ဆာဖြစ်စေသည့်နေရာတွင်တိုက်ရိုက်သိုလှောင်ထားသဖြင့်အကျိတ်နောက်ရှိတစ်သျှူးသို့ဆေးမပို့ဘဲရပ်တန့်သွားသောကြောင့်လူနာများသည်ဓာတ်မှန်ရောင်ခြည်ကုသမှုထက်နှလုံး၊ အဆုတ်နှင့်ကျန်းမာသောရင်သားကင်ဆာတစ်သျှူးကိုထိတွေ့မှုနည်းသည်။ ဤဒေသများသို့ဓါတ်ရောင်ခြည်နည်းပါးမှုသည်ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းဓါတ်ရောင်ခြည်ကုသမှုခံယူပြီးနောက်ဆယ်စုနှစ်များစွာအကြာတွင်နှလုံးရောဂါ၊ အထူးသဖြင့်လက်ဝဲဘက်ရင်သားကင်ဆာရှိသည့်လူနာများအတွက်အထူးအရေးကြီးပြီးကင်ဆာသည်နှလုံးနှင့်အဆုတ်နှင့်နီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် lymph node များသို့ဓါတ်ရောင်ခြည်လိုအပ်သောသို့မဟုတ်နှလုံးနှင့်အဆုတ်အခြေအနေကိုလိုအပ်သောလူနာများအတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးသည်။
ရင်သား / ရင်ဘတ်နှင့်ဒေသန္တရ lymph node များကုသမှုလိုအပ်သော metastatic ရင်သားကင်ဆာရှိသည်
doxorubicin သို့မဟုတ် trastuzumab ကဲ့သို့သော cardiotoxic chemotherapy ဆေးကိုလက်ခံလိမ့်မည်
ပရိုတွန်ကုထုံးနှင့်ဓာတ်မှန်ရောင်ခြည်ကုသမှုသည်ရင်သားကင်ဆာကိုကုသရန်နှင့်ခွဲစိတ်ရန်နှင့်မျိုးပွားရန်ကြိုးစားသောအခါကင်ဆာဆဲ (လ်) များကိုသတ်ခြင်းဖြင့်ကုသသည်။ သို့သော်အရေးကြီးသောခြားနားချက်ရှိသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဓာတ်ရောင်ခြည်ဓါတ်ရောင်ခြည်ဟာအရေပြားကိုထိုးဖောက်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့အများဆုံးဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုလျင်မြန်စွာလွှတ်ပေးပြီးသင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိတ်ထက်ကျော်လွန်သွားတဲ့အခါမှာဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှတ်သောကြောင့်၎င်းသည်တစ်သျှူးများပိုမိုမလိုလားအပ်သောဓါတ်ရောင်ခြည်များနှင့်ပရိုတွန်ကုထုံးများထက်ကျန်းမာသောတစ်သျှူးများနှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုပိုမိုပျက်စီးစေနိုင်သောကြောင့် ။
ပရိုတွန်ကုထုံးသည်အကျိတ်များသောနေရာ၌ဓါတ်ရောင်ခြည်အများစုကိုကယ်လွှတ်ပြီးရပ်တန့်စေပါသည်။ ကုသမှုareaရိယာကိုရောက်ရှိပြီးဖုံးလွှမ်းသွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကင်ဆာအကျိတ်မှထွက်သောဓါတ်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုမရှိတော့ပါ။ ပရိုတွန်ကုထုံးဖြင့်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နှလုံးနှင့်အဆုတ်များသို့ဓါတ်ရောင်ခြည်များစွာပို့လွှတ်သည်။
လူနာများသည်ကုသမှုခံယူစဉ်တွင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုခံစားရသော်လည်းပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ဆက်လက်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ လူနာများအနေဖြင့်လည်းရင်သားကင်ဆာအတွက်မည်သည့်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုသမှုနှင့်မဆိုအရေပြားယားယံခြင်းကိုခံစားရသည်။ သင်၏ကုသမှုကာလအတွင်းအရေပြားအဆင်မပြေမှုကိုသက်သာစေရန်ကူညီပေးသောဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာပညာရှင်သည်မုန့်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ပရိုတွန်ကုထုံးသည်ရင်သားကင်ဆာကုသရာတွင်ထိရောက်ကြောင်း၊ နှလုံးနှင့်အဆုတ်သို့ဓါတ်ရောင်ခြည်ပမာဏလျော့ကျစေပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းပါးသောလူနာများမှကောင်းစွာသည်းခံနိုင်ကြောင်းပြသသည့်လက်တွေ့အထောက်အထားများရှိသည်။
ပရိုတွန်ကုထုံးသည်ထိရောက်မှုရှိပြီးရင်သားကင်ဆာကုသရာတွင်ကောင်းမွန်စွာသည်းခံကြောင်းပြသခြင်းသည်အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည်။
မက်ဆာချူးဆက်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံ (MGH) မှလေ့လာမှုတစ်ခုအရဒေသတွင်းရှိရင်သားကင်ဆာရှိသူလူနာများအနေဖြင့်၊ အလွန်ပါးလွှာသည့်ပရိုတွန်ကုထုံးသည်ရင်ဘတ်နံရံနှင့်ဒေသန္တရအဆင့်ရှိရောဂါများကိုနှလုံးနှင့်အဆုတ်ကိုမလိုအပ်သောဆေးများမှသက်သာစေနိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။1
ProCure Proton ကုထုံးစင်တာနှင့် Memorial Sloan Kettering Cancer Centre တို့သည်ရင်သားကင်ဆာနှင့် lymph node များကုသရာတွင်ပရိုတွန်ကုထုံး၏အကြီးမားဆုံးလက်တွေ့လေ့လာမှုကိုမကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ MGH မှလေ့လာမှုရလဒ်များအရဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအလွန်နည်းပါးသောလူနာများနှင့်အတူတူပင်ရလဒ်များကိုပြသည်။ ပရိုတွန်ကုထုံးသည်အဆုတ်နှင့်နှလုံးသို့ဓါတ်ရောင်ခြည်အလွန်အမင်းနိမ့်ကျခြင်းကိုရရှိပြီးပစ်မှတ်အကျိတ်ကိုကုသခြင်းကိုမထိခိုက်စေပါ။2
ပရိုတွန်ကုထုံးသည်နှလုံးနှင့်အဆုတ်သို့ဓါတ်ရောင်ခြည်ပမာဏကိုလျှော့ချပေးသည်ကိုပြသသည့်လေ့လာမှုများတွင်အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ Paul Scherrer Institute မှလေ့လာမှုတစ်ခုအရပရိုတွန်ကုထုံးကိုပုံမှန်ဓာတ်မှန်ရောင်ခြည်ကုထုံးနှင့်ဒေသတွင်းရင်သားကင်ဆာကုသမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုကပရိုတွန်ကုထုံးသည်အကျိတ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးစံဓာတ်မှန်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနီးအနားရှိအင်္ဂါများသို့ဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုလျှော့ချပေးသည်။ ဤအချက်ကပရိုတွန်ကုထုံးသည်ရေတိုနှင့်ရေရှည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုလျှော့ချရန်အလားအလာရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။3
ProCure ပရိုတွန်ကုထုံးစင်တာ၌ကုသသောလက်ဝဲဘက်၊ အဆင့် (၃) ရင်သားကင်ဆာလူနာများကို အခြေခံ၍ နှိုင်းယှဉ်ကုသမှုအစီအစဉ်လေ့လာမှုကပရိုတွန်ကုထုံးသည်နှလုံး၊ အဆုတ်နှင့်ရင်သားကင်ဆာတို့သို့ကုသမှု၏ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်သိသိသာသာလျော့နည်းစေကြောင်းပြသခဲ့သည် ပုံမှန် X-Ray ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုသမှု (3D-CRT, HT နှင့် IMRT) ။5
ဆွီဒင်အမျိုးသားကင်ဆာ (New England Journal of Medicine တွင်ထုတ်ဝေသော Darby လေ့လာမှု) မှလေ့လာမှုတစ်ခုအရနှလုံးရောဂါသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနှလုံးရောင်ခြည်ပမာဏနှင့်တိုက်ရိုက်အချိုးကျကြောင်းပြသခဲ့သည်။6
လက်ရှိတွင် ProCure တွင်ရင်သားကင်ဆာစမ်းသပ်မှုနှစ်ခုရှိသည်။
ပရိုတွန်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးကိုအသုံးပြုပြီးအစောပိုင်းအဆင့်ရင်သားကင်ဆာနှင့်အတူအမျိုးသမီးများအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှိုင်းယှဉ်အဆင့် II, အလားအလာ, ကျပန်းစမ်းသပ်မှု။
ဒေသတွင်းရင်သားကင်ဆာနှင့်အတူအမျိုးသမီးများအတွက်ဒေသအလိုက်ဒေသတွင်း irradiation များအတွက် postoperative ပရိုတွန် radiotherapy ၏စူးရှခြင်းနှင့်ရေရှည်ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များနှုန်းကိုကြည့်ဖို့ Proton Collaborative Group မှ (PCG) ကပြုလုပ်ခဲ့သည့်အဆင့် -၂ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုတစ်ခု။ ဒီလေ့လာမှုမှာအထူးသဖြင့်နှလုံးရောဂါနဲ့ဒုတိယကင်ဆာကျိတ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်ပရိုတွန်ကုထုံးအပြီး ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အတွင်းနောက်ဆက်တွဲပါဝင်သည်။
ဟုတ်တယ်။ ပရိုတွန်ကုထုံးကိုခွဲစိတ်မှု၊ ဓာတုကုထုံးသို့မဟုတ်ပုံမှန်ဓာတ်မှန်ရောင်ခြည်ဓါတ်ရောင်ခြည်နှင့်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ProCure Proton ကုထုံးဌာနသည်မည်သည့်ခေါင်းနှင့်လည်ပင်းကင်ဆာအမျိုးအစားများကိုကုသပေးသနည်း။
ProCure ဆက်ဆံမှုများ -
နှာခေါင်း (နှာခေါင်း) လိုင်
Paranasal Sinuses (နှာခေါင်းအခေါင်းပေါက်ဝန်းကျင်ရှိအကန့်များ)
ဂလင်းတမျိုးနှင့်လျှာများ၏အခြေခံအပါအ ၀ င် Oropharynx (ပါးစပ်နောက်ဖက်ရှိလည်ချောင်းareaရိယာ)
မှုများထပ်မံဖြစ်ပွားသော ဦး ခေါင်းနှင့်လည်ပင်းကင်ဆာ (ယခင်ကုသခဲ့သော)
ပရိုတွန်ကုထုံးနှင့်ဓာတ်မှန်ရောင်ခြည်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးနှစ်ခုလုံးသည်သွေးခွဲရန်နှင့်မျိုးပွားရန်ကြိုးစားသောအခါကင်ဆာဆဲလ်များကိုသတ်ခြင်းဖြင့်ခေါင်းနှင့်လည်ပင်းကင်ဆာများကိုကုသသည်။ သို့သော်အရေးကြီးသောခြားနားချက်ရှိသည်။ X-Ray ဓါတ်ရောင်ခြည်သည်အရေပြားကိုထိုးဖောက်ပြီးနောက်အမြန်ဆုံးဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုထုတ်လွှတ်ပြီးသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိတ်ကျော်လွန်သွားသည်နှင့်အမျှဆဲလ်များများကိုမလိုချင်တဲ့ဓါတ်ရောင်ခြည်များနှင့်ထိတွေ့မိပြီးကျန်းမာသန်စွမ်းသောတစ်သျှူးနှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုပိုမိုပျက်စီးစေသည့်အခါဓါတ်ရောင်ခြည်ဆက်လက်ထုတ်လွှတ်သည်။ ပရိုတွန်ကုထုံးသည်အကျိတ်များသောနေရာ၌ဓါတ်ရောင်ခြည်အများစုကိုကယ်လွှတ်ပြီးရပ်တန့်စေပါသည်။ ကုသမှုareaရိယာကိုရောက်ရှိပြီးဖုံးလွှမ်းသွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကင်ဆာအကျိတ်မှထွက်သောဓါတ်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုမရှိတော့ပါ။ ၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိကျန်းမာသောတစ်သျှူးများပျက်စီးမှုကိုလျော့ချပေးပြီးပရိုတွန်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုခွင့်ပြုသည်။
ပရိုတွန်ကုထုံးသည်ခေါင်းနှင့်လည်ပင်းကင်ဆာများအတွက်ထိရောက်သောကုသမှုဖြစ်ကြောင်းပြသသည့်လေ့လာမှုများစွာရှိသည်။ ဒီလေ့လာမှုများကိုငါတို့တွေ့နိုင်ပါသည် သုတေသန စာမျက်နှာ။
ခေါင်းနှင့်လည်ပင်းမြင်းသရိုက်အနာရှိသည့်လူနာများစွာသည်ပရိုတွန်ကုထုံးအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ သင်ပရိုတွန်ကုထုံးကိုပိုမိုနားလည်လိုပါကဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေစဉ်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာပညာရှင်သည်သင်နှင့်မတူညီသောကုသမှုနည်းလမ်းများကိုဆွေးနွေးလိမ့်မည်။ သင်ပရိုတွန်ကုထုံးမှသင်အကျိုးရနိုင်ခြေရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ ProCure မှဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာပညာရှင်များသည်ပရိုတွန်ကုထုံးအပြင်ကင်ဆာရောဂါကိုကုသရန်အမျိုးမျိုးသောဓါတ်ရောင်ခြည်များကိုအသုံးပြုကြရာသင့်အားသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အတွက်ကုသမှုထောက်ခံချက်ပေးလိမ့်မည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားခေါ်ဆိုပါ More Information ကိုတောင်းဆိုခြင်း အွန်လိုင်း။
ကျောရိုး FAQs အနီးရှိအကျိတ်
ပရိုတွန်ကုထုံးသည်အဆင့်မြင့်ဓါတ်ရောင်ခြည်ပုံစံဖြစ်ပြီးကင်ဆာဆဲ (လ်) များအား၎င်းတို့အားကွဲပြားခြင်းနှင့်ကြီးထွားခြင်းမှကာကွယ်ပေးခြင်းဖြင့်ဖျက်ဆီးသည်။ ပရိုတွန်ကုထုံးသည်ပုံမှန်ဓါတ်မှန်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးတွင်အသုံးပြုသောဖိုတွန်အစားပရိုတွန်များ - အပြုသဘောဖြင့်အားသွင်းထားသောအက်တမ်အမှုန်များကိုအသုံးပြုသည်။ ပရိုတွန်ကုထုံးဖြင့်ဆရာဝန်များသည်ကျောရိုးအကျိတ်ကိုတိကျစွာပစ်မှတ်ထားနိုင်ပြီးပတ် ၀ န်းကျင်ရှိကျန်းမာသည့်တစ်သျှူးများကိုပျက်စီးစေမှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေသည်။ ပုံမှန်ဓါတ်ရောင်ခြည်ဓါတ်ရောင်ခြည်နှင့်မတူဘဲပရိုတွန်များသည်သူတို့၏ဓါတ်ရောင်ခြည်အမြောက်အများကိုအကျိတ်ထဲတိုက်ရိုက်ထည့်ပြီးရပ်လိုက်သည်။
သင့်ကျောရိုးအကျိတ်ရောဂါပေါ် မူတည်၍ ကုသမှုကိုအများအားဖြင့်တစ်ပတ်လျှင် ၅ ရက် 5-4 ပတ်အကြားကုသပေးသည်။ ကုသမှုတစ်ခုချင်းစီသည် ၁၅ မိနစ်မှ ၆၀ မိနစ်ခန့်အထိရှိနိုင်သော်လည်းအမှန်တကယ်ပရိုတွန်ပေးပို့မှုသည်စက္ကန့် ၆၀ သာရှိသည်။
ဟုတ်တယ်။ ပရိုတွန်ကုထုံးကိုသမားရိုးကျဓါတ်ရောင်ခြည်၊ ဟော်မုန်းကုထုံး၊ ဓာတုကုထုံးနှင့် / သို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ကုသမှုတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ProCure Proton ကုထုံးဌာနသည်ကျောရိုးအကျိတ်အမျိုးအစားများကိုမည်သို့ကုသသနည်း။
ပရိုတွန်ကုထုံးနှင့်ဓာတ်မှန်ရောင်ခြည်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးနှစ်ခုလုံးသည်ခွဲရန်နှင့်မျိုးပွားရန်ကြိုးစားသောအခါကင်ဆာဆဲလ်များကိုသတ်ခြင်းဖြင့်ကျောရိုးအနီးရှိအကျိတ်များကိုကုသပေးသည်။ သို့သော်အရေးကြီးသောခြားနားချက်ရှိသည်။ X-Ray ဓါတ်ရောင်ခြည်သည်အရေပြားကိုထိုးဖောက်ပြီးနောက်အမြန်ဆုံးဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုထုတ်လွှတ်ပြီးသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိတ်ကျော်လွန်သွားသည်နှင့်အမျှဆဲလ်များများကိုမလိုချင်တဲ့ဓါတ်ရောင်ခြည်များနှင့်ထိတွေ့မိပြီးကျန်းမာသန်စွမ်းသောတစ်သျှူးနှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုပိုမိုပျက်စီးစေသည့်အခါဓါတ်ရောင်ခြည်ဆက်လက်ထုတ်လွှတ်သည်။ ပရိုတွန်ကုထုံးသည်အကျိတ်များသောနေရာ၌ဓါတ်ရောင်ခြည်အများစုကိုကယ်လွှတ်ပြီးရပ်တန့်စေပါသည်။ ကုသမှုareaရိယာကိုရောက်ရှိပြီးဖုံးလွှမ်းသွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကင်ဆာအကျိတ်မှထွက်သောဓါတ်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုမရှိတော့ပါ။ ၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိကျန်းမာသောတစ်သျှူးများပျက်စီးမှုကိုလျော့ချပေးပြီးပရိုတွန်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုအကျိတ်ကိုပစ်မှတ်ထားစေသည်။
ပရိုတွန်ကုထုံးသည်ကျောရိုးအနီးရှိအကျိတ်များအတွက်ထိရောက်သောကုသမှုဖြစ်ကြောင်းပြသသည့်လေ့လာမှုများစွာရှိသည်။ ဒီလေ့လာမှုများကိုငါတို့တွေ့နိုင်ပါသည် သုတေသန စာမျက်နှာ။
ကျောရိုးအကျိတ်လူနာအများစုသည်ပရိုတွန်ကုထုံးကုသမှုစဉ်အတွင်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမခံစားရပါ။ အကယ်၍ အနည်ထိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပျို့ချင်ခြင်းကဲ့သို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပွားပါက၎င်းတို့သည်အများအားဖြင့်အသေးစားနှင့်အလွယ်တကူစီမံနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ပရိုတွန်ကုထုံးသည်ရေရှည်နှင့်အသက်အန္တရာယ်ရှိသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိပြီးမော်တာချို့ယွင်းခြင်းသို့မဟုတ်သွက်ချာပါဒဖြစ်နိုင်သည်။ လူနာအများစုသည်တက်ကြွစွာဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးကုသမှုစဉ်နှင့်အပြီးပုံမှန်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။
ကျောရိုးအကျိတ်နှင့်အတူလူနာအတော်များများပရိုတွန်ကုထုံးအတွက်ကောင်းသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဖြစ်ကြသည်။ အကယ်၍ သင်ပရိုတွန်ကုထုံးကိုကုသမှုနည်းလမ်းအဖြစ်စိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်စကားပြောရန်သင့်အားအကြံဥာဏ်ပေးနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်နိုင်သည်။ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေစဉ်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာအထူးကုသည်သင်နှင့်မတူညီသောကုသမှုနည်းလမ်းများကိုဆွေးနွေးလိမ့်မည်။ ProCure မှဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာပညာရှင်များသည်ပရိုတွန်ကုထုံးအပြင်ကျောရိုးကင်ဆာကိုကုသရန်အမျိုးမျိုးသောဓါတ်ရောင်ခြည်များကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အကိုက်ညီဆုံးသောကုသမှုအကြံပြုချက်ကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။
သင်၏ရောဂါပေါ် မူတည်၍ ကုသမှုကိုများသောအားဖြင့်တစ်ပတ်လျှင် ၅ ရက် 5-4 ပတ်အထိကြာမြင့်သည်။ ကုသမှုတစ်ခုချင်းစီသည် ၁၅ မိနစ်မှ ၆၀ မိနစ်ခန့်အထိရှိနိုင်သော်လည်းအမှန်တကယ်ပရိုတွန်ပေးပို့မှုသည်စက္ကန့် ၆၀ သာရှိသည်။
ဟုတ်တယ်။ ပရိုတွန်ကုထုံးကိုသမားရိုးကျဓါတ်ရောင်ခြည်၊ ဓာတုကုထုံးနှင့် / သို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ကုသခြင်းနှင့်အတူလိုက်နာ။ ဖြစ်စေအသုံးပြုနိုင်သည်။
ပရိုတွန်ကုထုံးနှင့်ဓာတ်မှန်ရောင်ခြည်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးနှစ်ခုလုံးသည်ခွဲစိတ်ရန်နှင့်ပွားများရန်ကြိုးစားသောအခါအူမကြီးဆဲလ်များကိုဖျက်ဆီးခြင်းဖြင့်အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းကင်ဆာကိုကုသပေးသည်။ သို့သော်အရေးကြီးသောခြားနားချက်ရှိသည်။ X-Ray ဓါတ်ရောင်ခြည်သည်အရေပြားကိုထိုးဖောက်ပြီးနောက်အမြန်ဆုံးဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုထုတ်လွှတ်ပြီးသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိတ်ကျော်လွန်သွားသည်နှင့်အမျှဆဲလ်များများကိုမလိုချင်တဲ့ဓါတ်ရောင်ခြည်များနှင့်ထိတွေ့မိပြီးကျန်းမာသန်စွမ်းသောတစ်သျှူးနှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုပိုမိုပျက်စီးစေသည့်အခါဓါတ်ရောင်ခြည်ဆက်လက်ထုတ်လွှတ်သည်။
ပရိုတွန်ကုထုံးသည်အကျိတ်များသောနေရာ၌ဓါတ်ရောင်ခြည်အများစုကိုကယ်လွှတ်ပြီးရပ်တန့်စေပါသည်။ ကုသမှုareaရိယာကိုရောက်ရှိပြီးဖုံးလွှမ်းသွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကင်ဆာအကျိတ်မှထွက်သောဓါတ်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုမရှိတော့ပါ။ ၎င်းသည်ပရိုတွန်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုကာကွယ်ပေးပြီးဓါတ်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုနှင့်ပုံမှန်ကျန်းမာသောတစ်ရှူးများပျက်စီးခြင်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ဟုတ်တယ်။ Texas ပြည်နယ်၊ ဟူစတန်ရှိ MD Anderson ကင်ဆာစင်တာမှလေ့လာမှုတစ်ခု (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာ၊ ဇီဝဗေဒ၊ ရူပဗေဒတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်) မှပရိုတွန်ကုထုံးသည်အစာပြွန်ကင်ဆာကိုကုသရာတွင် IMRT ထက်အဆုတ်ကိုသိသိသာသာသက်သာစေကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။4
ပရိုတွန်ကုထုံး၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအတည်ပြုသည့်နောက်ထပ်လေ့လာမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သည် သုတေသန စာမျက်နှာ။
အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းအကျိတ်နှင့်အတူလူနာအတော်များများပရိုတွန်ကုထုံးအတွက်ကောင်းသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဖြစ်ကြသည်။ အကယ်၍ သင်ပရိုတွန်ကုထုံးကိုကုသမှုနည်းလမ်းအဖြစ်စိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်စကားပြောရန်သင့်အားအကြံဥာဏ်ပေးနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်နိုင်သည်။ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေစဉ်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာအထူးကုသည်သင်နှင့်မတူညီသောကုသမှုနည်းလမ်းများကိုဆွေးနွေးလိမ့်မည်။ ProCure မှဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာပညာရှင်များသည်ပရိုတွန်ကုထုံးအပြင်အူလမ်းကြောင်းအူလမ်းကြောင်းကင်ဆာကိုလည်းကုသရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသောဓါတ်ရောင်ခြည်များကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသောကုသမှုအကြံပြုချက်ကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။
Base-of-Skull Tumor မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ပရိုတွန်ကုထုံးသည်အဆင့်မြင့်ဓါတ်ရောင်ခြည်ပုံစံဖြစ်ပြီးကင်ဆာဆဲ (လ်) များအား၎င်းတို့အားကွဲပြားခြင်းနှင့်ကြီးထွားခြင်းမှကာကွယ်ပေးခြင်းဖြင့်ဖျက်ဆီးသည်။ ပရိုတွန်ကုထုံးသည်ပုံမှန်ဓါတ်မှန်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးတွင်အသုံးပြုသောဖိုတွန်အစားပရိုတွန်များ - အပြုသဘောဖြင့်အားသွင်းထားသောအက်တမ်အမှုန်များကိုအသုံးပြုသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ပရိုတွန်ကုထုံးဖြင့်ဆရာဝန်များသည်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိကျန်းမာသောတစ်သျှူးများပျက်စီးမှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ချိန်ညှိနိုင်သည့် ဦး ခေါင်းခွံကိုပစ်မှတ်ထားနိုင်သည်။ ပုံမှန်ဓါတ်ရောင်ခြည်ဓါတ်ရောင်ခြည်နှင့်မတူသည်မှာပရိုတွန်များသည်သူတို့၏ဓါတ်ရောင်ခြည်အမြောက်အများကိုအကျိတ်ထဲသို့တိုက်ရိုက်ထည့်ပြီးရပ်လိုက်သည်။
ဟုတ်တယ်။ ပရိုတွန်ကုထုံးကိုပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်သမားရိုးကျဓါတ်ရောင်ခြည်၊ ဓာတုကုထုံးနှင့်ခွဲစိတ်မှုတို့အတွက်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ProCure ပရိုတွန်ကုထုံးဌာနသည်မည်သည့်အခြေအနေဖြင့် ဦး နှောက်အကျိတ်အမျိုးအစားများကိုကုသပေးသနည်း။
ပရိုတွန်ကုထုံးအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည့်အခွံ၏ ဦး ခေါင်းခွံများမှာ -
(vestibular schwannomas ဟုလည်းခေါ်သည်)
အခြေအနေ - ဦး ခေါင်းခွံအကျိတ်များအတွက်စံဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပရိုတွန်ကုထုံးကုသမှု၏အကျိုးကျေးဇူးများဘာတွေလဲ?
ပရိုတွန်ကုထုံးနှင့်ဓာတ်မှန်ရောင်ခြည်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးနှစ်ခုလုံးသည်အခြေခံကျသော ဦး ခေါင်းခွံကိုကုသရာတွင်ကင်ဆာဆဲလ်များကိုခွဲထုတ်။ ပွားများရန်ကြိုးစားသောအခါသတ်ဖြတ်ကြသည်။ သို့သော်အရေးကြီးသောခြားနားချက်ရှိသည်။ X-Ray ဓါတ်ရောင်ခြည်သည်အရေပြားကိုထိုးဖောက်ပြီးနောက်အမြန်ဆုံးဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုထုတ်လွှတ်ပြီးသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိတ်ကျော်လွန်သွားသည်နှင့်အမျှဆဲလ်များများကိုမလိုချင်တဲ့ဓါတ်ရောင်ခြည်များနှင့်ထိတွေ့မိပြီးကျန်းမာသန်စွမ်းသောတစ်သျှူးနှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုပိုမိုပျက်စီးစေသည့်အခါဓါတ်ရောင်ခြည်ဆက်လက်ထုတ်လွှတ်သည်။ ပရိုတွန်ကုထုံးသည်အကျိတ်များသောနေရာ၌ဓါတ်ရောင်ခြည်အများစုကိုကယ်လွှတ်ပြီးရပ်တန့်စေပါသည်။ ကုသမှုareaရိယာကိုရောက်ရှိပြီးဖုံးလွှမ်းသွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကင်ဆာအကျိတ်မှထွက်သောဓါတ်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုမရှိတော့ပါ။ ၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိကျန်းမာသောတစ်သျှူးများပျက်စီးမှုကိုလျော့ချပေးပြီးပရိုတွန်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုအကျိတ်ကိုပစ်မှတ်ထားစေသည်။
ပရိုတွန်ကုထုံးကိုပြသသောလက်တွေ့အချက်အလက်ရှိပါသလားဆိုသည်မှာအခြေခံကျသော ဦး ခေါင်းခွံအတွက်ထိရောက်သောကုသမှုဖြစ်သည်။
ပရိုတွန်ကုထုံးသည်အခြေခံ - ဦး ခေါင်းခွံအကျိတ်များအတွက်ထိရောက်သောကုသမှုဖြစ်ကြောင်းပြသသောလေ့လာမှုများစွာရှိပါသည်။ ဦး ခေါင်းခွံကိုအခြေခံသောအကျိတ်များသည်ပရိုတွန်ကုထုံးဖြင့်အနှစ် ၂၀ ကျော်ကုသမှုခံယူခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ပရိုတွန်များသည်ဤကင်ဆာအမျိုးအစားများအတွက်စောင့်ရှောက်မှုအဆင့်အတန်းတစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ ဒီလေ့လာမှုများကိုငါတို့တွေ့နိုင်ပါသည် သုတေသန စာမျက်နှာ။
အခြေအနေဖြင့် ဦး ခေါင်းခွံကိုကုသရာတွင်ပရိုတွန်ကုထုံး၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိပါသလား။
အခြေခံ -of ခေါင်းခွံအကျိတ်လူနာအများစုသည်ပရိုတွန်ကုထုံးကုသမှုစဉ်အတွင်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်သာခံစားကြရသည်။ ဖြစ်ပျက်နိုင်သမျှကိုစီမံရန်သင့်ဆရာဝန်နှင့်စောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့ကကူညီနိုင်သည်။ လူနာအများစုသည်တက်ကြွစွာဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးကုသမှုစဉ်နှင့်အပြီးပုံမှန်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။
အခြေခံကျသော ဦး ခေါင်းခွံအကျိတ်ရှိသောလူနာများသည်ပရိုတွန်ကုထုံးအတွက်ကောင်းမွန်သောအရည်အချင်းရှိသူများဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ပရိုတွန်ကုထုံးကိုကုသမှုနည်းလမ်းအဖြစ်စိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်စကားပြောရန်သင့်အားအကြံဥာဏ်ပေးနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်နိုင်သည်။ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေစဉ်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာအထူးကုသည်သင်နှင့်မတူညီသောကုသမှုနည်းလမ်းများကိုဆွေးနွေးလိမ့်မည်။ ProCure မှဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာပညာရှင်များသည်ပရိုတွန်ကုထုံးအပြင်အခြေခံအုတ်မြစ်အကျိတ်များကိုကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေရန်အမျိုးမျိုးသောဓါတ်ရောင်ခြည်များကိုအသုံးပြုကြသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောကုသမှုထောက်ခံချက်ကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။